टन्सिल चाँडै निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
न्यूजलय आइतबार २१, मङि्सर २०७७
ऐजेन्सी । टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खाना आदिका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे....
न्यूजलय बुधबार १०, मङि्सर २०७७
काठमाडौ । विश्वभर कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा वैज्ञानिक र चिकित्सकहरुले टोली लागिरहेका छन् । करिब १५० भ्याक्सिनहरु परीक्षणकै क्रममा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
अमेरिकामा बन्दै गरेको मोडर्ना भ्याक्सिन ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको दाबी गरिएको छ । यस्तै, अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेका मिलेर उत्पादन गरिरहेको....
काठमाडौं । अमेरिकालगायतका विभिन्न मुलुकले कोरोनाविरुद्धका खोपहरु परीक्षण गरिरहेका बेला यसको वितरणमा हुने विभेदलाई लिएर चिन्ता हुन थालेको छ ।
सबैभन्दा प्रभावित समुदाय र गरिब व्यक्तिमा यो खोपको सर्वसुलभता र पँहुच पुर्‍याउन चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का प्रमुख डा. टेङेडस....
न्यूजलय शनिबार ०६, मङि्सर २०७७
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेम्डेसिभिर औषधिको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । संक्रमितको उपचारमा रेम्डेसिभिरले केही पनि सकारात्मक प्रभाव नपारेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न डब्ल्युएचओले आग्रह गरेको हो ।
डब्ल्युएचओले अहिले कोरोना संक्रमितमा रेम्डेसिभिर प्रयोग गरिरहेका देशहरूलाई यसको प्रयोग तत्काल बन्द....
न्यूजलय बुधबार ०३, मङि्सर २०७७
टेलिग्राफ यूकेले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार यो भ्याक्सिनको सुरक्षा जाँचहरू पनि भइसकेको र उत्पादक कम्पनिबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा भनिएको हो। बेलायतमा भ्याक्सिन यो वर्षको अन्तिमसम्ममा आइपुग्ने....
चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले उल्लेख गरे अनुसार नयाँ....
न्यूजलय आइतबार ३०, कार्तिक २०७७
मान्छेको सास विश्लेषण गर्ने प्रविधिले छाती सम्बन्धी अन्य सङ्क्रमणलाई कोभिड....
आज थपिए १९ सय ४६ जना कोरोना संक्रमित, १३ संक्रमितको मृत्यु
न्यूजलय शनिबार २९, कार्तिक २०७७
काठमाण्डौ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर गरिएका परीक्षणमा थप १९ सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यो अवधिमा २५ सय तीनजना संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् । शनिबारसम्म देशभर संक्रमित हुनेको संख्या दुई लाख आठ हजार दुई सय ९९ पुगेको छ।
सावधान ! बिहान खाली पेटमा नपिउनुहोस् चिया
न्यूजलय बिहीबार २७, कार्तिक २०७७
बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ । त्यसैले बिहान खाली पेटमा नखानुहोस् यी चीजः
धेरैजसो व्यक्ति बिहान उठेपछि ग्रीन टी वा चिया पिउने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा....
न्यूजलय सोमबार २४, कार्तिक २०७७
धेरैजसो मानिसहरुको बेलुका ढिला खाना खाने बानी हुन्छ । तर बेलुका ढिला खाना खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ । सकभर बेलुकीको खाना छिटो खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले धेरै राम्रो मानिन्छ । यस्ता छन् बेलुकी छिटो खाना खानुको फाइदाहरुः
१. यदि तपाईं तौल नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्छ....